Dowladda & Ahlusunna oo heshiis ka gaaray Arrimaha Galmudug – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 12 December 2019
Wasaaradda Arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa Maanta soo saartay war-murtiyeed ay shaacineyso heshiis laga gaaray arrimaha Maamulka Galmudug.
Wada hadalo maalmihii la soo dhaafay u socday Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka iyo Hoggaanka Ahlusuna ayaa kama dambeys waxaa saaka laga gaaray heshiis,waxaana la go’aamiyey in Ahlusunna 20 (labaatan) Xildhibaan laga siiyo Baarlamaanka Cusub ee Maamulka Galmudug oo ka koobnaan doona 89 Xubnood.
Hoos Ka Akhriso War-Saxaafadeedka Wasaaradda oo dhameystiran.
Ciidamo ka tirsan AMISOM oo ka baxay Soomaaliya